ओलीको कार्यकर्ता बन्ने शर्तमा सि.के. राउत जेलबाट छुटेको खुलासा – MeroJilla.com
ओलीको कार्यकर्ता बन्ने शर्तमा सि.के. राउत जेलबाट छुटेको खुलासा
जेलमुक्त हुन डा. सिके राउतले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारसामु आत्मसमर्पण गरेको खुलेको छ ।तराई-मधेश टुक्रयाएर अलग्गै देश बनाउने भन्दै विभिन्न गतिविधी गरेपछि राउतलाई जेल हालिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि राउत बिहिबार जेलमुक्त भएका थिए । जेलभित्रबाटै सरकारसँग राउतले वार्ता गरेको र पृथकतावादी गतिविधी त्याग्न सहमत भएपछि अदालती फैसलामार्फत रिहा गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
अखण्ड नेपाल स्वीकार गर्ने वाचासहित आजै राउतले सत्ताधारी (ने.क.पा.)अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुखबाट स्वतन्त्र मधेशको गतिविधी समाप्त पार्ने घोषणा गर्दैछन् । १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा यससम्बन्धी कार्यक्रम हुँदैछ ।
साथै, राउतले जेलमुक्त हुनुअघि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समेत विघटन गर्ने शर्तमा राजी भएको खुलेको छ । सोहीअनुसार राउतले आजै सो गठबन्धन विघटन गर्दैछन् । निकट भविष्यमै राउत सत्ताधारी (ने.क.पा.) मा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् ।